Iibso iskaanka 3D: sida loo doorto kan ugu fiican | qalab bilaash ah
Iibso iskaanka 3D: sida loo doorto kan ugu fiican
Isaac | | Daabacaadda 3D
Intaa waxaa dheer in aad awood u leedahay inaad naftaada naqshadeyso joomatari gabalka aad rabto inaad ku daabacdo Yazici 3D iyadoo la isticmaalayo software, waxa kale oo jirta suurtogal kale oo ka fudud oo koobi kara walxaha jira si sax ah. Waxay ku saabsan tahay 3d iskaanka, kaas oo kaa ilaalin doona in aad iskaan ka samayso shayga aad rabto oo aad u beddesho qaab dhijitaal ah si aad dib ugu taabato ama aad u daabacdo sida ay tahay in aad nuqul ka samayso.
Tilmaamahan waxaad ku ogaan doontaa waxay yihiin. Sawir-qaadayaasha 3D ee ugu fiican iyo sida aad u dooran karto midka ugu habboon hadba baahidaada.
Sawirka 3D... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Incen Pop 3D Scanner,... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Iftiiminaya 3D EINSCAN-SP -... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qalabka Iskaanka ee HE3D Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Sawirka 3D...
Tayada qiimaha	Incen Pop 3D Scanner,...
Waxaan jecel nahay	Iftiiminaya 3D EINSCAN-SP -...
Qalabka Iskaanka ee HE3D
1 Sawir-qaadayaasha 3D ee ugu fiican
1.1 Iftiiminaya 3D EINSCAN-SP
1.2 Iftiiminaya 3D Uno Can
1.3 Hal-abuurka 3D CR-Scan
1.4 Qiimaha BQ
2 Waa maxay iskaanka 3D
2.1 Sawirka 3D sida uu u shaqeeyo
2.2.1 Sawir-qaade mobaylka 3D
2.2.2 iskaanka 3d guriga
2.3 Codsiyada iskaanka 3D
2.4 Sida loo doorto iskaanka 3D
Sawir-qaadayaasha 3D ee ugu fiican
Waxaa jira noocyo badan oo caan ah, sida German Zeiss ee sharafta leh, Shining 3D, Artec, Polyga, Peel 3D, Phiz 3D Scanner, iwm, taasoo ka dhigaysa xitaa mid aad u adag in la doorto. Haddii aad shaki ka qabto sawirka 3D aad iibsanayso, waa kuwan qaar ka mid ah. moodooyinka ugu fiican Waxa aan kugula talineyno inaad sameyso iibsashada saxda ah:
Iftiiminaya 3D EINSCAN-SP
Iftiiminaya 3D EINSCAN-SP -...
Este Sawir-qaade 3D leh tignoolajiyada iftiinka cad ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican haddii aad raadineyso wax xirfadle ah. Xallinteedu waa ilaa 0.05 mm, iyada oo la qabsanaysa xitaa faahfaahinta ugu yar. Waxay sawiri kartaa tirooyinka laga soo bilaabo 30x30x30mm ilaa 200x200x200mm (oo leh miiska leexsan) iyo waliba qaar ka weyn kuwa waaweyn ee 1200x1200x1200mm (haddii loo isticmaalo gacan ama saddex-geesood). Intaa waxaa dheer, waxay leedahay xawaare iskaan oo wanaagsan, awood u dhoofinta OBJ, STL, ASC iyo PLY, nidaamka si toos ah, iyo xiriiriyaha USB. La jaan qaada Windows
Iftiiminaya 3D Uno Can
Iftiimin 3d Uno Waxay arki kartaa Uno...
Noocan kale ee astaantan sharafta leh ayaa xoogaa ka jaban tii hore, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa door wanaagsan haddii aad raadineyso shay xirfad-yaqaan ah. sidoo kale isticmaal tignoolajiyada midabka cad, oo leh xallinta 0.1 mm iyo awoodda lagu sawiro tirooyinka laga bilaabo 30x30x30 mm ilaa 200x200x200 mm (ku yaal miiska leexashada), inkastoo aad sidoo kale u isticmaali karto gacanta ama saddex-geesoodka tirooyinka ugu badnaan 700x700x700 mm. Waxay leedahay xawaarihiisa iskaanka oo wanaagsan, wuxuu ku xiraa USB, wuxuuna la shaqayn karaa OBJ, STL, ASC iyo PLY qaabab file sida kii hore. La jaan qaada Windows
Hal-abuurka 3D CR-Scan
Hal-abuurka 3D - Qalabka...
Summadan kale ee weyn waxay abuurtay sawir qaade loogu talagalay qaabaynta 3D aad u fudud in la isticmaalo, oo si toos ah u hagaajinaya, iyada oo aan loo baahnayn qalabaynta ama isticmaalka calaamadaha. Waxay ku xidhaa USB waxayna la jaanqaadi kartaa Windows, Android iyo macOS. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay saxsanaan sare oo leh ilaa 0.1 mm iyo xallinta 0.5 mm, sidoo kale waxay ku fiicnaan kartaa isticmaalka xirfadlaha sababtoo ah sifooyinka iyo tayada. Dhanka cabbirrada iskaanka, aad bay u weyn yihiin, si loo sawiro qaybo waaweyn.
Sawir gacmeedkan 3D ee summada Isbaanishka ee BQ waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan haddii aad raadinayso wax la awoodi karo DIY. Sawir-qaade sax ah oo 0.5mm ah oo degdeg ah oo leh kamarad Logitech C270 HD tayo leh, laba lakab oo toosan ah oo heerka 1 ah, xiriiriyaha USB, Nema stepper matoorada, Darawalka ZUM, oo awood u leh inuu u dhoofiyo G-Code iyo PLY, oo la socon kara Linux iyo nidaamyada hawlgalka Windows.
Mid kale oo ka duwan kuwii hore. Sawir 3D ah oo leh a 0.3mm saxnaanta, Dual Infrared Sensors (Isha Nabdoon), oo leh kamarado qoto dheer, Baadhitaanka Degdega ah, RGB Camera for Texture Capture, OBJ, STL, iyo PLY Taageerada Dhoofinta, Awoodda Xadhkaha ama Wireless, 5 Hababka iskaanka kala duwan, oo la jaan qaada Android, iOS, macOS iyo nidaamyada hawlgalka Windows.
Waa maxay iskaanka 3D
Un Sawirka 3D waa qalab awood u leh inuu falanqeeyo shay ama goobta si loo helo xogta qaabka, texture, iyo mararka qaarkood midabka sidoo kale. Macluumaadkaas waa la habeeyey oo loo beddelaa noocyo dhijitaal ah oo saddex-gees ah oo loo isticmaali karo in laga beddelo software-ka ama lagu daabaco daabacahaaga 3D oo laga sameeyo nuqullo sax ah shayga ama goobta.
Habka ay u shaqeeyaan iskaan-yarayaashani inta badan waa indho-indheyn, iyagoo soo saaraya daruur tixraac ah oo ku wareegsan dusha shayga si ay uga fogaadaan joomatari saxda ah. Sidaa darteed, iskaanka 3D way ka duwan yihiin kamaradaha caadiga ahInkasta oo ay leeyihiin muuqaal koonto-qaabaysan, kamaraduhu waxay qabtaan macluumaadka midabka dusha sare ee goobta aragga, halka iskaanka 3D uu qabto macluumaadka booska iyo booska saddex-geesoodka ah.
Sawir-qaadayaasha qaarkood ma bixiyaan nooc dhammaystiran oo leh hal iskaan, laakiin waxay u baahan yihiin tallaalo badan si ay u helaan qaybo kala duwan oo qaybta ka dibna isku dheji adigoo isticmaalaya software-ka. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waa a wax badan oo sax ah, raaxo leh oo dhakhso badan si aad u hesho joomatari qayb oo aad awood u yeelato in aad bilowdo daabacaadda.
Sawirka 3D sida uu u shaqeeyo
Sawirka 3D wuxuu guud ahaan u shaqeeyaa iyadoo la adeegsanayo shucaac qaarkeed u sii daaya sida a iftiin, IR, ama laydhka laysarka kaas oo xisaabin doona masaafada u dhaxaysa shayga soo baxaya iyo shayga, iyada oo calaamadinaysa barta tixraaca maxaliga ah iyo dhawr dhibcood oo ku yaala dusha sare ee qaybta la koobiyeeyo, iyada oo mid kastaa leedahay iskudubarid. Isticmaalka nidaamka muraayadaha, waxay xaaqi doontaa oogada oo waxay heli doontaa isku-duwayaasha ama dhibcaha kala duwan si loo gaaro nuqulka saddex-geesoodka ah.
Iyadoo ku xiran masaafada shayga, saxnaanta la rabo, iyo xajmiga ama kakanaanta shayga, waxaad u baahan kartaa hal qaado ama ka badan hal.
Waxaa jira 2 noocyada scanner 3D aasaasiga ah, iyadoo ku xiran habka ay u sawiraan:
Xiriir: Noocyada noocaan ah ee 3D waxay u baahan yihiin inay taageeraan qayb loo yaqaan raadiyaha (sida caadiga ah birta adag ama caarada sapphire) ee dusha shayga. Sidan, qaar ka mid ah dareemayaasha gudaha ayaa go'aamin doona booska bannaan ee baaritaanka si dib loogu sameeyo shaxanka. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha xakamaynta hababka wax soo saarka iyo saxnaanta 0.01 mm. Si kastaba ha ahaatee, maaha doorasho wanaagsan oo jilicsan, qiimo leh (tusaale farshaxan taariikhi ah), ama walxo jilicsan, sababtoo ah caarada ama stylus waxay wax ka beddeli karaan ama waxyeellayn karaan dusha sare. Taasi waa, waxay noqon doontaa iskaanka wax burburiya.
xiriir la'aan: waa kuwa ugu fidsan uguna sahlan in la helo. Waxaa loogu yeeraa sababtoo ah uma baahna xiriir, sidaas darteedna ma dhaawacayaan qaybta ama ma beddeli doonaan sina. Bedelkii baaritaanka, waxay isticmaali doonaan sii deynta calaamadaha ama shucaaca qaarkood sida ultrasound, mowjadaha IR, iftiinka, raajada, iwm. Waa kuwa ugu fidsan uguna sahlan in la helo. Kuwaas dhexdooda, markooda, waxaa jira laba qoys oo waaweyn:
Hantida: Qalabkani waxay falanqeeyaan qaabka shayga iyo, xaaladaha qaarkood, midabka. Waxa lagu sameeyaa cabbir toos ah oo dusha sare ah, iyada oo la cabbirayo isku-duwayaasha dacallada, xaglaha iyo fogaanta si loo ururiyo macluumaadka joomatari ee saddex-geesoodka ah. Mahad dhamaanteed waxa ay leedahay in ay abuurto daruuro dhibco ah oo aan xidhiidhsanayn taas oo ay ku qiyaasi doonto in ay soo saarto nooc ka mid ah laydhka korantada (ultrasound, X-ray, laser,...) model CAD 3D.. Gudaha kuwan waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah noocyada hoose sida:
Waqtiga duulimaadka: Nooc ka mid ah iskaanka 3D oo isticmaala leysarka oo aad loo isticmaalo in lagu sawiro sagxadaha waaweyn, sida qaababka juqraafiyeed, dhismayaal, iwm. Waxay ku salaysan tahay Qabow. Way ka saxsan yihiin wayna ka jaban yihiin.
saddex xagal: Waxa kale oo ay u isticmaashaa laysarka saddex-geesoodka, iyada oo beemku ku garaacayo shayga iyo kamarad ogaanaysa barta laysarka iyo fogaanta. Sawir-qaadayaashani waxay leeyihiin saxnaan sare.
farqiga wajiga: waxa uu cabbiraa faraqa u dhexeeya iftiinka la soo daayay iyo kuwa la helay, waxa uu cabbiraa cabbirkan si uu u qiyaaso masaafada shayga. Saxnimada dareenkani waa dhex dhexaad u dhexeeya labadii hore, in yar ka sarreeya ToF iyo in yar oo ka hooseeya saddex xagal.
holography conoscopic: waa farsamo interferometric ah oo uur ka soo dhalaalaysa oogada soo dhex marto crystal birefringent ah, taaso ah, crystal leh laba tusaha refractive, mid caadi ah oo go'an iyo mid kale oo aan caadi ahayn, taas oo ah shaqada xagasha dhacdooyinka ray ku yaal dusha muraayadda. Natiijo ahaan, laba fallaadho oo isbarbar socda ayaa la helay kuwaas oo lagu sameeyay in ay farageliyaan iyada oo la adeegsanayo lenska cylindrical, faragelintan waxaa qabta dareeme kamarad caadi ah oo heleysa qaabka geesaha. Inta jeer ee faragelintan ayaa go'aamisa masaafada shayga.
iftiin habaysan: ku samee qaab iftiin shayga oo la falanqeeyo qaab-dhismeedka uu sababay joomatari goobta.
iftiin la habeeyey: waxay sii daayaan iftiin (waxa ay inta badan leedahay wareegyo baaxad leh oo qaab synodal ah) oo si joogto ah ugu beddelaya shayga. Kamaradu waxay qaban doontaa tan si loo go'aamiyo masaafada.
XisaabaadkaSawir-qaade noocan oo kale ah wuxuu ku siin doonaa macluumaadka fogaanta iyadoo la isticmaalayo xoogaa shucaac ah si loo qabto. Caadi ahaan waxay isticmaalaan laba kamaradood oo kala duwan oo ku wajahan goobta si ay u helaan macluumaad saddex-geesood ah iyagoo falanqeynaya sawirada kala duwan ee la qabtay. Tani waxay falanqeyn doontaa masaafada u jirta dhibic kasta waxayna siin doontaa xoogaa iskudubarid si loo sameeyo 3D. Xaaladdan oo kale, natiijooyin wanaagsan ayaa la heli karaa marka ay muhiim tahay in la qabto dusha sare ee shayga la sawiray, iyo sidoo kale mid ka jaban. Farqiga u dhexeeya kuwa firfircooni waa in aysan jirin nooc ka mid ah shucaaca elektromagnetic-ka ah, laakiin waxay si fudud u xaddidaan inay qabtaan qiiqa hore ee deegaanka, sida iftiinka muuqda ee ka muuqda shayga. Waxa kale oo jira noocyo kala duwan sida:
stereoscopic: Waxay isticmaalaan mabda' la mid ah sida sawir-qaadista, iyaga oo go'aaminaya masaafada pixel kasta ee sawirka. Si tan loo sameeyo, wuxuu guud ahaan isticmaalaa laba kamaradood oo muuqaal ah oo kala duwan oo tilmaamaya isla goobta. Falanqaynta sawirada ay qabatay kamarad kasta, waxaa suurtogal ah in la go'aamiyo masaafadan.
SilhouetteIsticmaal sawir-gacmeedyo laga sameeyay sawirro isku xiga oo ku wareegsan shayga saddex-geesoodka ah si aad uga gudubto iyaga si aad u samaysato qiyaas muuqaal ah oo shayga ah. Habkani wuxuu dhibaato ku leeyahay walxaha godan, maadaama aysan qabsan doonin gudaha.
Qaabaynta ku salaysan sawirka: Waxaa jira habab kale oo uu isticmaalo isticmaaluhu oo ku salaysan sawir-qaadista.
Sawir-qaade mobaylka 3D
Isticmaalayaal badan ayaa badanaa ku weydiiya haddii aad awoodid Isticmaal talefanka casriga ah sidii uu yahay iskaanka 3D. Xaqiiqdu waxay tahay in mobilada cusubi ay isticmaali karaan dareemayaasha kamaradooda ugu weyn si ay u awoodaan inay qabtaan tirooyinka 3D iyada oo ay ugu wacan tahay abka qaarkood. Sida iska cad ma heli doonaan natiijooyin sax ah oo isku mid ah sida sawir-qaade 3D ah, laakiin waxay faa'iido u yeelan karaan DIY.
qaar wanaagsan apps ee aaladaha mobilada IOS/iPadOS iyo Android oo aad soo dejisan karto oo aad isku dayi karto waa:
iskaanka 3d guriga
Waxay kaloo badanaa ku weydiiyaan haddii aad awoodid samee iskaanka 3d guri lagu sameeyo. Runtuna waxa ay tahay in ay jiraan mashaariic loogu talo galay kuwa sameeya kuwaas oo wax badan kaa caawin kara arrintan, sida Furan. Waxa kale oo aad ka heli doontaa qaar ka mid ah mashaariicda ku salaysan Arduino oo la daabici karo si aad adigu isu keento sidan oo kale, oo xitaa waad heli kartaa sida loo rogo xbox kinect 3d scanner. Sida iska cad, way ku fiican yihiin mashaariicda DIY iyo waxbarashada, laakiin ma awoodi doontid inaad gaarto natiijooyin la mid ah kuwa xirfadlayaasha ah.
Codsiyada iskaanka 3D
Sida for Codsiyada iskaanka 3D, waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan oo ka badan inta aad qiyaasi karto:
codsiyada warshadaha: Waxaa loo isticmaali karaa xakamaynta tayada ama cabbirka, si loo eego haddii qaybaha la soo saaray ay la kulmaan dulqaadka lagama maarmaanka ah.
Injineernimada gadaal: aad bay faa'iido ugu leeyihiin in la helo qaab dhijitaal ah oo sax ah oo shay ah si loo darso oo loo soo saaro.
Dukumentiyada sida loo dhisayQaabka saxda ah ee xaaladda xarunta ama dhismaha ayaa la heli karaa si loo fuliyo mashaariicda, dayactirka, iwm. Tusaale ahaan, dhaqdhaqaaqyada, qallafsanaanta, iwm, waxaa lagu ogaan karaa marka la falanqeeyo moodooyinka.
madadaalada dhijitaalka ah: Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sawiro walxaha ama dadka si loogu isticmaalo filimada iyo ciyaaraha fiidiyowga. Tusaale ahaan, waxaad iskaan kartaa ciyaaryahan kubbadda cagta dhabta ah oo waxaad samayn kartaa qaab 3D si aad u nooleeyso si ay xaqiiqo u noqoto ciyaarta fiidiyowga.
Falanqaynta iyo ilaalinta hidaha dhaqanka iyo taariikhda: Waxaa loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo, dukumeentiyo, la abuuro diiwaannada dhijitaalka ah, iyo in laga caawiyo ilaalinta iyo dayactirka hidaha dhaqanka iyo taariikhda. Tusaale ahaan, in la falanqeeyo farshaxannada, cilmiga qadiimiga, mummies, shuqullada farshaxanka, iwm. nuqulo sax ah ayaa sidoo kale la abuuri karaa si loo soo bandhigo iyo in asalkoodu aanu dhaawacmin.
Samee moodooyinka dhijitaalka ah ee xaaladaha: xaaladaha ama jawiga waa la falanqeyn karaa si loo go'aamiyo dhererka dhulka, loo rogo raadadka ama muuqaalka qaabka 3D dhijitaalka ah, loo abuuro maab 3D, iwm. Sawirada waxaa qaadi kara 3D laser scanners, RADAR, sawirada dayax-gacmeedka, iwm.
Sida loo doorto iskaanka 3D
Waqtiga dooro iskaanka 3D ku haboon, haddii aad ka labalabaynayso dhowr nooc, waa in aad falanqeyso sifooyin taxane ah si aad u heshid midda ku habboon baahiyahaaga iyo miisaaniyada aad diyaar u tahay inaad maalgashato. Qodobbada maskaxda lagu hayo waa:
Miisaaniyadda: Waa muhiim in la go'aamiyo inta aad ku maalgelin karto sawirkaaga 3D. Waxaa jira laga bilaabo €200 ama €300 ilaa kuwa qiimihiisu yahay kumannaan yuuro. Tani waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa haddii ay u noqon doonto isticmaalka guriga, meesha aysan u qalmin in la maalgeliyo wax badan, ama isticmaalka warshadaha ama xirfadlaha, halkaasoo maalgelintu ay bixin doonto.
sax: waa mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan. Sida ugu wanaagsan ee saxda ah, natiijooyinka ugu wanaagsan ee aad heli karto. Codsiyada guriga saxnaanta hoose ayaa laga yaabaa inay ku filnaato, laakiin codsiyada xirfadlayaasha ah waxaa muhiim ah in aad sax u ahaato si aad u hesho faahfaahinta ugu yar ee qaabka 3D. Sawir-qaadayaal badan oo ganacsi waxay u muuqdaan inay u dhexeeyaan 0.1 mm iyo 0.01 mm, laga bilaabo saxsanaan yar ilaa ay u kala horreeyaan.
Xallinta: waa in aan lagu khaldin saxnaanta, inkastoo tayada qaabka 3D ee la helay ay sidoo kale ku xirnaan doonto. Halka saxnimadu ay tilmaamayso heerka saxnaanta saxda ah ee aaladda, xallintu waa masaafada ugu yar ee ka dhex jiri karta laba dhibcood oo ku dhex jira qaabka 3D. Caadi ahaan waxa lagu cabbiraa milimitir ama micron, mar kasta oo yar ayaa natiijadu sii wanagsan tahay.
Xawaaraha iskaanka: waa wakhtiga ay qaadanayso in la sameeyo iskaanka. Iyada oo ku xidhan tignoolajiyada la isticmaalo, iskaanka 3D waxa lagu qiyaasi karaa si uun ama si kale. Tusaale ahaan, sawir-qaadayaasha iftiinka habaysan waxaa lagu cabbiraa FPS ama fiimyada ilbiriqsikii. Kuwo kale waxaa lagu qiyaasi karaa dhibco ilbiriqsikii, iwm.
Adeegsiga Fudud: Waa qodob kale oo muhiim ah in la tixgeliyo marka la dooranayo iskaanka 3D. In kasta oo qaar badan oo horeba ay u fududahay in la isticmaalo oo ay horumaraan ku filan si ay u helaan shaqada iyaga oo aan wax badan gelin isticmaale, waxaad sidoo kale heli doontaa qaar ka adag kuwa kale.
cabbirka qaybSida madbacadaha 3D ay u leeyihiin xaddidaad cabbireed, iskaanka 3D sidoo kale waa sameeyaan. Baahiyaha isticmaalaha u baahan inuu digitize walxaha yaryar la mid ma aha kan raba inuu u isticmaalo walxaha waaweyn. Xaalado badan ayaa loo isticmaalaa in lagu sawiro walxaha cabbirkoodu kala duwan yahay, markaa waa inay ku habboon yihiin inta ugu yar iyo inta ugu badan ee aad ku ciyaareyso.
Portability: Waxaa muhiim ah in la ogaado halka loo qorsheeyay in lagu qaado rasaasta, iyo in loo baahan yahay iftiin si loo qaado oo lagu qabto muuqaalo meelo kala duwan, iwm. Waxa kale oo jira kuwo batari ku shaqeeya si ay u awoodaan inay si aan kala go' lahayn u qabtaan.
U hoggaansanaanta: Waa muhiim inaad doorato iskaanka 3D ee ku habboon goobtaada. Qaarkood waa iskutallaab, iyagoo ku habboon nidaamyada hawlgalka ee kala duwan, laakiin dhammaantood maaha.
Software: Waa waxa runtii dhaqaajiya iskaanka 3D, soosaarayaasha aaladahaan waxay inta badan fuliyaan xalalkooda. Qaar ka mid ah sida caadiga ah waxay leeyihiin hawlo dheeraad ah oo loogu talagalay falanqaynta, qaabeynta, iwm., kuwa kale waa sahlan yihiin. Laakiin ka digtoonow, sababtoo ah qaar ka mid ah barnaamijyadani waa kuwo awood badan, waxayna u baahan yihiin shuruudaha ugu yar ee kombuyuutarkaaga (GPU, CPU, RAM). Sidoo kale, way wanaagsan tahay in horumariyahu uu bixiyo taageero wanaagsan iyo cusbooneysiin joogto ah.
Dayactirka: Waxa kale oo wanaagsan in aaladda qabashada loo hayo sida ugu dhakhsaha badan oo fudud ee suurtogalka ah. Sawir-qaadayaasha 3D qaarkood waxay u baahan yihiin jeegag dheeraad ah (nadiifinta indhaha,…), ama waxay u baahan yihiin habaynta gacanta, kuwa kalena si toos ah ayay u sameeyaan, iwm.
Half: Waa muhiim in la go'aamiyo waxa shuruudaha noqon doona inta lagu jiro qabashada qaabka 3D. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay saameeyaan aaladaha iyo tignoolajiyada qaarkood. Tusaale ahaan, xadiga iftiinka, qoyaanka, heerkulka, iwm. Wax-soo-saarayaashu waxay inta badan tilmaamaan noocyada kala duwan ee ay qaabkoodu si fiican u shaqeeyaan, waxaadna u baahan tahay inaad doorato mid ku habboon shuruudaha aad raadinayso.
Qaybaha daabacaha iyo hagaajinta
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Daabacaadda 3D » Iibso iskaanka 3D: sida loo doorto kan ugu fiican
Waa kuwee daabacaha 3D resin si aad u iibsato